सुन्दर यु’वतीले स्त’न खे’लाउदै टिक-टक भिडियो बनाए पछि सामाजिक संजालमा भाइरल ! – Sidha Post 24
सुन्दर यु’वतीले स्त’न खे’लाउदै टिक-टक भिडियो बनाए पछि सामाजिक संजालमा भाइरल !
एउटि सुन्दर युवतीले स्त’न खेलाउदै टिक-टक भिडियो बनाए पछि सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । मान्छे भाइरल हुनको लागि के के गर्न पछि पर्दैनन् । यी यु’वतिले भा’इरल हुनकै लागि यस्तो ‘ह’र्कत गरेकी छ्न । यु’वती भिडियोमा अ’र्धन’ग्न भएर अ’श्लिल ह’र्कत गर्दै छिन । **** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
मेरो नाम टिना हो म अहिले १८ बर्ष को भए । केटा हरु देख्दा एक प्रकार्को ईमो आउछ । झन सर्टलेस केटा हरु देखे भने झनै ईमो आउछ । ल स्टोरी तिर जुम् एक दिन साथी ले उस्को डेड्म्म नहुँदा मलाई घर मा साथी दिनु भनेर बोलाई । म पनि घर्मा भनेर साथीको घर गए । साथी र उस्को दाजु रैछ घर मा । दाई चै गोल खेल्नु जानु भको रोइछ । मलाई त्यो दाई एक्दम हेन्ड्सम लाग्छ । पूरा भिडियो हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस
युवतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नाे शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको खोजीमा हुन्छन् ।त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टिकाउ हुनेछ ? के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला ? आदि सोचमा हराउने गर्दछन् ।केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चिन्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै गम्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् । यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
अब ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै विदेश जान नपाइने !
पतिको लिं’ ग ला मो भन्दै सहन नसकी स’म्बन्ध वि’च्छेद